Inqubomgomo Yobumfihlo | Izintaba ezinkulu, iJizera Mountains, iPharadesi iPharadesi
Iseva yePetrPikora.com igcinwe ubuchwepheshe be-HTTP obuqinile bokuThutha (HSTS) ukuze uvikeleke kakhulu.Ukuvikeleka okuThutha okuThutha okunamandla(I-HSTS) kuyindlela yokuphepha kwikhompyutha evimbela ukuxhumana kwenethiwekhi phakathi kwesiphequluli sewebhu kanye nesiphakeli sewebhu ngaphambi kokuhlaselwa kwe-downgrades futhi kulula ukuvikela ukukhishwa kokuxhumeka (ngakho-ukuphangwa kwekhukhi). I-mechanism ivumela iseva yewebhu ukuthi iphoqele isiphequluli ukuthi ikhulume kuphela ngokusebenzisa uxhumano lwe-HTTPS olubethelwe, lokuqeda ukudluliswa kwedatha nge-protocol ye-HTTP engaqinisekisiwe. I-HSTS ichaza i-RFC 6797. Iseva yeWeb isebenza i-HSTS isebenzisa inhloko ye-HTTPOkuqinile-Ezokuthutha-Ezokuphepha,okuchaza isikhathi esiphezulu isiphequluli esingafinyelela kuso kuseva ngokuphepha kuphela. I-HSTS isiza ukuvikela izinhlelo zokusebenza zewebhu ngokumelene nokunye okungahambi kahle (imibono) nokuhlaselwa kwenethiwekhi okusebenzayo.Ngendlela yokwenza i-HSTS, umhlaseli osebenzisa ukuhlaselwa kwabantu phakathi nendawo unethuba eliphansi kakhulu lokuthola noma yiziphi izicelo noma izicelo ezithunyelwe phakathi komsebenzisi nesicelo sewebhu. Sibheka ukuphepha kwakho!
Abasebenzisi bangase fundaInqubomgomo yemfihlo for ukukhangisa kanye Network sokuqukethwe Googleukusetshenziswa ikhukhi DARTZikhiphe ohlwini.
Uma ufuna, kuniniabenqabayo amafayela amakhukhi i-Google IncGDN ngokusebenzisaElahla ikhukhi le-DoubleClick.
Umbhalo onconyiwe:Ikheli lethu lewebhu ngu: https://petrpikora.com.
Umbhalo onconyiwe:Lapho izivakashi ukwengeza amazwana kule webhusayithi, idatha eqoqwe ngesimo kuboniswe ukuphawula isiphequluli IP ikheli kanye ejenti yomsebenzisi string ngokuchaza okwengeziwe yesivakashi, esiza ukuthola spam.
Umbhalo onconyiwe:Uma ulayisha izithombe kule sayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe ngemininingwane yendawo efakiwe (i-EXIF GPS). Izivakashi zesayithi zingalanda futhi zibuke noma iyiphi idatha yendawo kusuka kuzithombe kuwebhu.
Umbhalo onconyiwe:Uma ungeza amazwana kusayithi lethu, ungasivumela ukuthi silondoloze igama lakho, ikheli le-imeyili, kanye newebhusayithi kumakhukhi. Ngale ndlela, sizama ukwandisa induduzo yakho uma ubhala amazwana amasha, ngakho ngeke usugcwalise futhi. Lawa makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Umbhalo onconyiwe:Okuthunyelwe kule sayithi kungase kube nokuqukethwe okufakiwe (isibonelo, isiqophi, izithombe, izihloko, njll). Okushicilelwe okuvela kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele kwenye indawo.
Umbhalo onconyiwe:Uma ungeza amazwana, amazwana kanye nemethadatha yayo izogcinwa kuze kube phakade. Idatha igcinwe ngenhloso yokuzitholela ngokuzenzakalelayo zonke izimvo ezilandelayo esikhundleni sokuzigcina emgqeni wokulinganisela.
Umbhalo onconyiwe:Uma une-akhawunti kule sayithi noma wena ngokungeza amazwana, ungabhalisela ukuthola ifayela kolwazi lomuntu siqu ukuba sibambelele ngawe, kuhlanganise lonke ulwazi ukuthi osinikeze lona. Ungase futhi ucele ukukhishwa nganoma imiphi imininingwane yomuntu okuyinto sibambelela ngawe. Lolu khetho akubandakanyi ulwazi ukuthi ziyadingeka ukugcina zokuphatha, yezizathu zomthetho noma zokuphepha.
Umbhalo onconyiwe:Ukuphawula kwezivakashi kungaskenwa ngensizakalo yokuthola ukugaxekile okuzenzakalelayo engatholakala ngaphandle.
Uma udinga olunye ulwazi noma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nge-imeyili ku-Inqubomgomo.
→ Abasebenzisi bangase baphume ekusebenziseni ikhukhi le-DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google Advertising ne-Content Network kule URL elandelayo:http://www.google.com/privacy_ads.html
Ngenkathi ngamunye walabo abalingani bokukhangisa enenqubomgomo yabo yobumfihlo ye-site yabo, imithombo ebuyekeziwe nexhumano igcinwa lapha:Izinqubomgomo Inqubomgomo.
Kumele uxhumane nezinqubomgomo zobumfihlo eziqondene nalezi ziseva zomkhangiso wesithathu ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nemikhuba yabo kanye nemiyalelo yokuthi ungakhetha kanjani eminye imikhuba ethile. Inqubomgomo yobumfihlo ye -PetrPikora.com ayisebenzisi futhi asikwazi ukulawula imisebenzi yabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ungathola uhlu olunzulu lwalezi zinqubomgomo zobumfihlo nezixhumanisi zabo lapha:Inqubomgomo yemfihlo Links.
Uma ufuna ukukhubaza amakhukhi, ungenza kanjalo ngokusebenzisa izinketho zakho zesiphequluli ngasinye. Ukwaziswa okuningiliziwe mayelana nokuphathwa kwe-cookie ngeziphequluli ezithile zewebhu kungatholakala kumawebhusayithi apheqululwazi.Ayini ama-cookie?
Sicela ubhekeInqubomgomo Yobumfihlo ye-PayPalukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Ngokusebenzisa lesi sandiso, ungakwazi ukugcina idatha yomuntu siqu noma ukwabelana ngedatha ngenkonzo yangaphandle.Funda kabanzi mayelana nokuthi lokhu kusebenza kanjani, kuhlanganise nokuthi yini ongase ufune ukuyifaka kwinqubomgomo yakho yobumfihlo.
Imininingwane eyengeziwe mayelana nokusingatha idatha yomsebenzisi ingatholakala kwisitatimende sobumfihlo se-YouTube ngaphansihttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nendlela yokusingatha idatha yomsebenzisi, sicela ubheke ku-Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Vimeohttps://vimeo.com/privacy.
Imininingwane eyengeziwe mayelana nokusingatha idatha yomsebenzisi ingatholakala kuhttps://developers.google.com/fonts/faqfuthi kumgomo wobumfihlo we-Google kuhttps://www.google.com/policies/privacy/.